Somaliland: Nin Ingiriis Ah Oo Foojari Ku Tilmaamay Dacaayado WADDANI Kaga Been Abuuray
Home Somali News Somaliland: Nin Ingiriis Ah Oo Foojari Ku Tilmaamay Dacaayado Madasha iyo WADDANI...
Mr. Gordon Bentley, oo ah ninkii ay sawiradiisa ku adeegsadeen Kooxda sharci darrada ah ee Madasha iyo xisbiga WADDANI fadeexadii kulankii been abuurka ahaa ee London ayaa iska fogeeyay in uu wax lug ah ku lahaa Dacwadii ay sheegeen inay u gudbiyeen dawladda Ingiriiska.
Waxa uu sheegay in aanu ka shaqaynin wax xil ahna aanu ka haynin wasaaradda khaarajiga Ingiriiska iyo barwaaqo sooranka.
Kooxda siyaasadda ku fashilantay ee Madashu waxa ay sheegteen in ay kulan yeesheen dhawaan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibada iyo barwaaaqo sooranka si ay u waxyeeleeyaan sumcadda hoggaamiyeyaasha hormoodka u ah Somaliland.
Mr. Bentley uu ku beeniyay dhawaaqii Madasha qoraal uu ku baahiyay bartiisa Face-book-ga.”Waxaan ka war helay in ay shaqsiyan iga been abuurteen fikrada ah in aan u hayo howl diblomaasiyadeed Ingiriiska, taasi oo ah wax lagu qoslo oo gebi ahaanba maadeys ah,” ayuu yidhi ninkii kooxda Madasha iyo WADDANI Sawirkiisa sifaha been abuurka ah u adeegsadeen.
Mr. Bentley waxa uu sheegay si aan rasmi ahayn in loo adeegsadey xarun ha’yadeed oo ku taalla koonfurta London kadib markii Siciid Qulumbe iyo xubno la socday ay dalxiis u tageen xaruntaasi oo oo lagu siinayay macluumaad la xidhiidha diritaanka adeegyo daryeelka bulshadda ah.
Arrintani waxa ay caddeynaysaa fadeexad weyn oo ay cagaha la galeen kooxda madasha oo u adeegaysa xisbiga WADDANI oo dacaayadaha xukuumadda ka dhigtay barnaamij siyaasadeedkiisa.
Somaliland: “Anigu Ma Jecli In Layla Xanto Amb. Cawil Iyo Cali Warancadde Oo Weli Saaxiib Ayaanu Nahay [Laakiin] Xanta WADDANI baa igu badan oo Waxaan Doonayaa Inaan Kelmad Sheego”
South Africa: Somalis badly burned in south africa anti-foreigner violence